CFA बनाम. फरम - जो प्रमाणीकरण राम्रो छ? [It'saClose Call!]
CFA बनाम फरम: जो प्रमाणीकरण राम्रो छ?
23 अगस्ट CFA बनाम फरम: जो प्रमाणीकरण राम्रो छ?
Posted at 22:50h मा Alternate Articles द्वारा Bryce Welker, सीपीए0टिप्पणीहरू
Updated:अक्टोबर 23, 2018
CFA वा फरम राम्रो तपाईंको क्यारियर लागि हो?
एक CFA के हो?
एक फरम के हो?
CFA बनाम फरम: प्रमाणीकरण आवश्यकताहरु
CFA बनाम फरम: क्यारियर पथ
CFA बनाम फरम: प्रमाणीकरण लागत
CFA बनाम फरम: तलब
त्यसैले, जो तपाईं को लागि राम्रो छ?
यो वित्त मा आफ्नो करियर अघि बढाउन निर्णय गर्दा विद्यार्थीहरूको बनाउन पर्छ भनेर सबैभन्दा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू मध्ये एक छ. को प्रमाणपत्र प्रत्येक कठिन काम धेरै लिन्छ किनभने आफ्नो रुचि महत्त्वपूर्ण छ, पैसा र समय. तपाईं आफ्नो प्रमुख मतभेद सजग छैनन् भने विकल्प गाह्रो हुन सक्छ.
को CFA र फरम प्रमाणपत्र बीच प्राथमिक फरक ढाकिएको छन् भनेर शीर्षकहरू छ. CFA कर्पोरेट वित्त जस्तै वित्त मा विषयहरू एक व्यापक दायरा समेट्छ, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, लेखा, स्थिर आय, र डेरिवेटिव. अर्कोतर्फ, फरम जोखिम व्यवस्थापन मा एक विशेष. पनि, CFA लगानी बैंकिङ करियर लागि राम्रो तपाईं तयार, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, वित्तीय अनुसन्धान. को फरम बैंकहरुमा जोखिम व्यवस्थापन एक क्यारियर बनाउन चाहने ती लागि उपयुक्त छ, खजाना विभाग वा जोखिम आकलन मा.
CFA चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक लागि CFA संस्थान मार्फत कमाएको एक प्रमाणीकरण खडा र छ. CFAs लगानी व्यवस्थापनमा विशेषज्ञहरु छन्. CFAs द्वारा आयोजित केही लोकप्रिय काम शीर्षक पोर्टफोलियो प्रबन्धक समावेश, अनुसन्धान विश्लेषक, र लगानीको बैंकर. तिनीहरूले पनि कर्पोरेट वित्त काम गर्छन.
फरम लागि खडा छ वित्तीय जोखिम प्रबन्धक र जोखिम व्यवसायी को ग्लोबल संघ द्वारा प्रस्तावित एक प्रमाणीकरण छ. Garp र फरम प्रमाणीकरण अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त. FRMs एक संगठनको जोखिम आकलन र कम वा अफसेट गर्न रणनीति विकास. तिनीहरूले बैंकिङ काम पाउन सकिन्छ, निगम, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीहरु, र सरकारी.
एक CFA बन्न क्रममा, तपाईं CFA संस्थान द्वारा प्रस्तावित प्रमाणीकरण कार्यक्रममा भर्ना गर्नुपर्छ. कार्यक्रम मा भर्ना गर्न, तपाईं शिक्षा / काम अनुभव चार वर्ष डिग्री वा संयोजन आवश्यक र निम्न विषय कवर तीन-भाग परीक्षा पास:
यसलाई लिन्छ 300 को CFA परीक्षा प्रत्येक स्तर पारित गर्न अध्ययन समय घन्टा. पनि, को चार्टर प्राप्त गर्न, तपाईं एक CFA अन्तर्गत सम्बन्धित काम अनुभव चौका वर्ष हुन आवश्यक पर्छ. तपाईं पनि CFA संस्थान को एक सदस्य बन्न अनिवार्य.
तपाईं एक फरम बन्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं जोखिम व्यवसायी को ग्लोबल संघ प्रबन्ध दुई-भाग परीक्षा पास गर्नुपर्छ (Garp) निम्न विषय कवर:
जोखिम मा मूल्य
यो सामान्यतया कम से कम फरम उम्मेदवार लिन्छ 150 घण्टा प्रत्येक परीक्षा स्तर लागि अध्ययन गर्न र Garp लिन FRMs प्रोत्साहन 40 जारी शिक्षा घन्टा हरेक दुई वर्ष. जबकि Garp कुनै पनि विशिष्ट चार वर्ष डिग्री आवश्यकता वा क्रेडिट घण्टा न्यूनतम नम्बर लागि कल छैन, जोखिम व्यवस्थापन एउटा काम पकड यसलाई गर्न आवश्यक छ स्नातक गरेको.
या त प्रमाणीकरण कमाउन, अध्ययन र परीक्षा तयारीमा धेरै समय लगानी गर्न तयार.
यो CFAs किनभने आफ्नो व्यापक अध्ययन र कौशल को FRMs भन्दा बढी क्यारियर अवसर छ भनेर विशिष्ट छ, विशेष गरी प्रबंधकीय स्थितिहरु मा. CFAs दृढ गरेको लगानी व्यवस्थापन गर्न र ठूलो विशेषज्ञ, जो एक विस्तृत नेट क्यारियर-बुद्धिमानी कास्ट गर्न सक्नुहुन्छ. CFAs सामान्यतया हेज कोष काम, लगानी बैंकहरू, र कर्पोरेट वित्त लगानी बैंकिङ गरिरहेको, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, र इक्विटी अनुसन्धान.
अर्कोतर्फ, FRMs जोखिम विश्लेषण र बाहिर एक कम्पनी वा पोर्टफोलियो भित्र यसलाई कम गर्ने उपायहरू सोचिरहनुभएको मा धेरै विशेष ध्यान हो. FRMs सामान्यतया प्रबंधकीय र कार्यकारी स्तर स्थितिहरू जोखिम र लगानी जोखिम मा ध्यान गर्ने पकड.
को CFA परीक्षा को एक समय कार्यक्रम भर्ना शुल्क छ $450. प्रत्येक स्तर सामान्यतया लागत लागि कुल परीक्षा शुल्क $930. CFA उम्मेदवार तिर्न आशा गर्न सक्छौं $1,100 गर्न $1,700 आफ्नो चार्टर प्राप्त गर्न.
को फरम परीक्षा लिन, तपाईं एक तिर्नुपर्छ $400 प्रत्येक परीक्षा को लागत बाहेक भर्ना शुल्क. भाग म लागत $875 र भाग द्वितीय लागत $475. भुक्तानी आशा गर्न सक्छौं $1,050 गर्न $1,500 एक फरम बन्न.
दुवै परीक्षा लागि पास दरहरू छन् 40 प्रतिशत सीमा.
कुनै पनि पेशामा तलब काम शीर्षक निर्भर, अनुभव वर्ष, र स्थान.
CFAs बीच एक तलब कमाउन सक्नुहुन्छ $45,000 र $180,000 प्रति वर्ष आफ्नो स्थिति आधारमा, अनुभव, र उद्योग. को फरम तलब दायरा CFA तलब सीमा धेरै समान छ. FRMs सामान्यतया कमाउन $50,000 गर्न $165,000.
दुवै पदनाम उत्तिकै सबै दुनिया भर सम्मान गर्दै र न एक अन्य भन्दा राम्रो छ. तिनीहरू केवल भिन्न छन्.
जबकि CFA पद स्कोप मा फराकिलो छ र निवेश मा भारी केन्द्रित, को फरम संगठन को जोखिम आकलन र प्रबन्धमा माहिर. दुई बीच आफ्नो निर्णय जहाँ आफ्नो चासो झूठ मा पूर्ण निर्भर छ र तपाईं थप के गर्दै मन पराउँछन्. If you want to learn more about the best CFA prep courses you can go here.
तपाईं दुवै हुन सक्छन् किन कुनै कारण छ. यो सबै तपाईं आफ्नो क्यारियर संग गर्न चाहनुहुन्छ के मा निर्भर गर्दछ. एक CFA दुवै भइरहेको लागि सबैभन्दा तार्किक परिदृश्य फरम प्रमाणीकरण is if you areaCFA and would like to specialize in risk management. सम्झनु, को फरम पद को CFA भन्दा तरिका थप विशेष छ. त्यसैले, यो दुवै छ लाभप्रद हुन सक्छ.
म तपाईं आफ्नो क्यारियर संग गर्न चाहनुहुन्छ के त्यो नजर सिफारिस र एक छनोट हुनेछ. त्यसपछि तपाईं आफ्नो क्यारियर सुरु गरेपछि, यदि यो अर्को एउटा पछि लाग्न लाभदायक हुनेछ तपाईं तय गर्न सक्छन्.
शीर्ष फरम पाठ्यक्रम तुलना